Fiberglass Roving-saareyaasha iyo shirkado - Shiinaha Maro adag Roving Factory
Naga soo wac: 0086- (0) 792-8322300
Dharka 3D Glass
3D Mesh Gudaha Dhexdeeda
Wadada Tooska ah
Xargaha la jarjaray
BMC (Xarunta Wax Isukeenta Jumlada)
Xargaha loo jarjaray Thermoplastics-ka
Maro adag oo la shiiday (Fiberglass Powder)
Jawiga hawada (Microsphere)
Sariir goyn ah
Maro adag oo la jarjaray Strand Mat Emulsion
Tolay Mat Combo (Maro Multiaxial)
Xiran Roving Combo Mat
Dharka Biaxial + 45 ° -45 °
Dharka Biaxial 0 ° 90 °
Triaxial Fabric Longacudinal Triaxial (0 ° + 45 ° -45 °)
Mashiinka aan tooska ahayn
Maqaarka Cadka (Xijaabka)
Saqafka (Biyaha aan caddayn)
Fiberglass Wall Cover Cover Cadka
S-Glass Fiber (Awood Sare)
Fiber Kaarboon firfircoon
Dheriga ubaxa FRP
2021 qiimaha jumlada Maro Cadka Maro - Maro adag oogada Maro Cadka - Maro adag Beihai
Daboolka Darbiga (Crack-Resistance)
3D Maro adag-xidhkii Fabric
3D FRP Panel oo leh cusbi
Dharka Kaarboonka Firfircoon ee Firfircoon
E-galaas Isku-duuban Roving Panel
1.Waxaa loo maraa habka wax u sameynta guddi joogto ah waxaa lagu dahaadhaa cabir ku saleysan silane oo la jaan qaadaya polyesterka aan dhergin.
Waxay bixisaa miisaan fudud, xoog sare iyo xoog saameyn saameyn leh,
waxaana loogu talagalay in lagu soo saaro alwaaxyo iyo dermo hufan oo loogu talagalay darbiyada tansparent.
E-galaas Isku-uruurinaya Roving Si loo buufiyo
1.Goodnability wanaagsan ee hawlgalka xereynta,
-Si fudud u-soo-bixi,
.Si fududeyn ka-bixinta goobooyinka ，
Dib ugama soo noqonayso xaglo fiiqan,
Guryaha farsamo fiican
2.Hydrolytic resistance qaybo ka mid ah, oo ku habboon habka buufinta-xawaaraha sare leh ee lagu buufiyo aalado
E-galaas Abaabulaan Roving Waayo, Go'aan buuxinta
1.Waxaa si gaar ah loogu talagalay geedi socodka fiiqan fiilada FRP, oo la jaan qaadaya polyesterka aan buuxin.
2.It sheyga isku dhafan ee ugu dambeeya wuxuu keenaa hanti farsamo aad u fiican,
3.Waxaa si weyn loogu isticmaalay in lagu soo saaro maraakiibta keydinta iyo tuubooyinka shidaalka, warshadaha kiimikada iyo macdanta.
E-galaas Isku-uruurinta Roving ee SMC
1. Loogu talagay fasalka A dusha sare iyo qaab dhismeedka SMC.
2.Waxay kuxirantahay cabir waxqabad sare leh oo la jaan qaada cusbada polyesterka aan dhergin
iyo cusbada vinyl ester.
3.Waxaa loo barbardhigaa dhaqaajinta SMC dhaqameedka, Waxay soo gudbin kartaa waxyaabaha galaaska badan kujira ee gogosha SMC waxayna leedahay qaab wanaagsan oo qoyan-bax ah
4.Waxaa loo adeegsaday qaybaha baabuurta, albaabada, kuraasta, barkadaha qubeyska, iyo taangiyada biyaha iyo qalabka dhiig baxa
Toosinta Tooska ah ee LFT
1.Waxaa lagu dahaadhay cabbir silane ku saleysan oo la jaan qaadaya PA, PBT, PET, PP, ABS, PPS iyo POM resins.
2.Widely used in warshadaha ee baabuurta, koronto, qalabka guriga, dhismaha & dhismaha, elektarooniga ah & korontada, iyo aerospace
Toosinta Tooska ah ee loogu talagalay CFRT
Waxaa loo adeegsadaa habka CFRT.
Fiberglass yarns waxay ahaayeen bannaanka oo aan laga soo saarin bobbins-yada shelf ka dibna loo jiheeyay isla jihada;
Jardiinooyinka waxaa lagu kala diray xiisad waxaana kululeeyay hawo kulul ama IR;
Dhismaha kuleylka kuleylka leh ee la shubay waxaa bixiyay mid wax soo saare ah waxaana lagu miiray fiberglass cadaadis;
Qaboojinta ka dib, xaashidii ugu dambaysay ee CFRT ayaa la sameeyay.
Toosinta Tooska ah ee Qalabka Wareejinta
1.It waa la jaanqaadi karaa polyester unsaturated, polyurethane, vinyl ester, epoxy iyo phenolic resins.
Isticmaalka muhiimka ah waxaa ka mid ah soo saarista tubooyinka FRP ee dhexroor kala duwan, tuubooyin cadaadis sare leh oo loogu tala galay kala guurka batroolka, maraakiibta cadaadiska, haamaha keydka, iyo, qalabka kuleylka sida ulaha korontada iyo tuubada dahaarka.
E-galaas Isku-uruurinaya Roving For GMT
1. Waxay kuxirantahay cabir ku saleysan silane oo la jaan qaada cusbada PP.
2. Waxaa loo adeegsaday habka gogosha loo baahan yahay ee GMT.
3.Arajiyadaha adeegsiga dhamaadka: gawaarida acoustical, dhismaha & dhismaha, kiimikada, xirxirida iyo gaadiidka qaybaha cufnaanta yar.
E-galaas Isugeynaya Roving For Thermoplastics
1. Waxay kuxirantahay cabir ku saleysan silane oo la jaan qaada nidaamyo badan oo cusbi ah
sida PP 、 AS / ABS ， gaar ahaan xoojinta PA ee u adkaysta hydrolysis-ka wanaagsan.
2.Si qaab ahaan loogu talagalay geeddi-socodka extrusion mataanaha-ku-soo-saarka si loo soo saaro dhagaxyada 'thermoplastic granules'.
Codsiyada muhiimka ah waxaa ka mid ah qaybo isku xiraya tareenka, 、 qaybo baabuurta, codsiyo elektaroonik ah & elektaroonig ah.
E-galaas Isu-urursaday Roving Waayo, ridaya Centrifugal
1. Lagu daboolay qiyaasta ku-saleysan-ku-saleysan, oo la jaanqaadaya miraha polyesterka aan dhergin
2.Waa qaab dejin lahaansho lahaansho oo la adeegsado iyadoo la adeegsanayo habka wax soosaarka gaarka ah taas oo marka la isku daro keenta xawaare qoyan oo aad u dhakhso badan iyo dalab cusbi ah oo aad u hooseeya.
3.Ku darso buuxinta buuxinta ugu badan iyo sidaas darteed soosaarida biibiile ugu jaban.
4.Mainly waxaa loo isticmaalay in lagu soo saaro tuubooyinka Centrifugal casting ee qeexitaano kala duwan
iyo qaar ka mid ah hababka gaarka ah ee loo yaqaan Spay-up.
E-galaas Isku-uruurinaya Roving For Chopping
1. Waxay kuxirantahay cabbir silane ku saleysan oo gaar ah, oo la jaan qaadaya UP iyo VE, isla markaana keenaya nuugista cusbi aad u sarreeya iyo goos goos aad u fiican,
Waxyaabaha isku dhafan ee ugu dambeeya waxay soo gudbiyaan caabbinta biyaha ka sarreeya iyo u adkaysiga daxalka kiimikada.
3.Si ahaan ahaan loo isticmaalo soo saarida tuubooyinka FRP.
Tooshka Tooska ah ee Dharka
1.Waxay ku habboontahay polyester-ka unsaturated, vinyl ester iyo epoxy resins.
Hantida tolnimada ee wanaagsan waxay ka dhigeysaa mid ku habboon badeecada muraayadaha, sida dharka roogga, dermaha isku dhafan, derin la tolay, dhar fara badan oo axial ah, geotextiles, shabaggeedii la qaabeeyay.
Wax soo saarka isticmaalka dhamaadka ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhismaha & dhismaha, tamarta dabaysha iyo codsiyada yacht.
Shiinaha Beihai Maro adag Co., Ltd.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2005-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.